Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Nepal » Efa nanatrika ny toerana nahaterahan'i Buddha Buddha ve ianao?
Vaovao Mafana Nepal • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
I Nepal no toerana nahaterahan'i Lord Buddha.
Ny Tempolin'i Maya Devi ao Lumbini dia handray ireo mpitsidika indray rehefa tonga ny fandrahonana COVID-19.
eTurboNews ao anatin'ireo andiam-pitaterana ataonay izay mitohy dia mampatsiahy an'izao tontolo izao ny mety ho fizahan-tany izay hiverina tsy ho ela.
I Nepal dia malaza amin'ny fitetezana tendrombohitra sy fitsangantsanganana fa ho an'ny mpandeha tsy dia mahaliana dia be ny hatsaran-tarehy, ny bibidia ary ny fifohazana ara-panahy miandry anao. Lumbini no ohatra quintessential an'io.
Nefa tandremo, ity dia tranonkala matanjaka ara-panahy ka amperora lehibe nandao ny ady ary naka fiainana milamina; Lumbini dia manana fahefana hanova.
Lumbini dia tranokalan'ny UNESCO World Heritage. Misy angovo na aura ho an'i Lumbini izay tsy azo diso.
Ny amperora Ashoka dia nanangana izay noheverina ho voalohany amin'ny “Andry Ashoka Pillars” marobe eto amin'ny toerana nahaterahan'i Buddha. Ny nanjakan'i Ashoka (taona 304-233 talohan'i Kristy) dia niavaka tamin'ny zava-misy satria io Mpanjaka Mpanjakan'ny Maoritania io dia tena niady tampoka ary nivadika bodisma ary nandao ny ady ary nanokana ny taona farany tamin'ny fianarany ny fandriam-pahalemana sy ny fomban'ny Buddha.
Ny Tempolin'i Maya Devi ao Lumbini dia mbola foto-drandrahana ary ny arkeology dia manohy mahita zava-baovao sy manan-danja momba ilay tranonkala. Eo akaikin'ny toerana misy ny tempoly ankehitriny, ny Ashoka Pillar malaza dia mijoro miaraka amin'ny soratra izay manondro ity toerana ity ho toerana nahaterahan'ny Buddha.
Tamin'ny 2014 no nanambarana azy, mikasa ny hampandroso an'i Lumbini i Nepal, efa fantatra hatrizay ho toerana nahaterahan'i Lord Buddha, ho Tanànan'ny fandriampahalemana eran-tany.
Betsaka ny milaza fa na eo aza ny fiezahana isan-karazany hamadihana an'i Lumbini ho "Mkah of Buddhists", dia mbola atao ambanin-javatra ihany io faritra io ary mitaky famatsiam-bola an'arivony tapitrisa dolara.
Manam-pahaizana maro no mino fa ny nahitana azy dia mety handamina ny fifanolanana tamin'ny daty nahaterahan'i Siddhartha Gautama, izay lasa Buddha.
Androany i Lumbini dia mandray tempoly sy monasitera maro izay natsangan'ny firenena am-polony maro. Miavaka amin'izany ny Monastera Buddhist Royal Thai, Monastera Buddhist Chinese Zhong Hua. Kambodza Monasiteran'ny Pagoda fandriampahalemana eran-tany ary mazava ho azy ny firavaka satro-boninahitra, ny Tempolin'i Maya Devi. Mora ny mamakivaky ny boulevard lava ary mitsidika azy rehetra. Misy tranombakoka eo an-toerana ihany koa misy relikaly an'arivony maro izay efa nofongarina tao amin'ny tranon'ny Maya Devi Temple.
Voahodidin'ny tantara sy ny maha-zava-dehibe ny fombam-pivavahana an'i Lumbini dia mety ho fanandramana mangetaheta ara-panahy tokoa, ka alao antoka fa manome fotoana ampy hamelana azy rehetra hiditra.
Lumbinī dia bodista toerana fivahinianana masina ao amin'ny Distrikan'i Rupandehi any amin'ny Faritanin'i Lumbini any Nepal. Io no toerana niterahan'i Mpanjakavavy Mahamayadevi, Siddhartha Gautama, tamin'ny taona 563 al.f.i., araka ny fomban-drazana bodista.
Ahoana no ahatongavana any Lumbini?
Amin'ny alàlan'ny rivotra dia mandehana sidina 30 minitra mankany Siddharthanagar ary fiara 28 km avy eo.
Bisy. Mijanona mandritra ny 10-11 ora hisakafo eny an-dalana
Fiara tsy miankina 7-8 ora
Ny fahazoana ny zotra amin'ny alàlan'ny Hetauda dia manolotra safidy iray amin'ny fitsidihana an'i Barsa Wildlife Reserve, Chitwan, na amin'ny lalana roa mandritra ny dia lavitra amin'ny alàlan'ny Pokhara dia manolotra fijanonana mijanona ao Bandipur, ilay tanàna tampon-tampon'ny havoana feno kolontsaina Newar, avy eo mankany Pokhara hitsidika an'i Phewa. Lake, jereo ny Annapurna massif. Raha manam-potoana ianao ary te hahita ny karazana topografia sy ny toerana faran'izay betsaka eto Nepal, manakarama fiara manokana ary manaova dia lavitra ary mahazoa izany rehetra izany amin'ny dia iray.
Indray mandeha any Lumbini dia misy trano fandraisam-bahiny marobe manolotra vidiny sy serivisy isan-karazany. Manoro hevitra anao ny hamandrihinao mialoha ho an'ny toerana rehetra kasainao haleha amin'ny dia.
Nandroso i Nepal Loharanon'ny bodisma.
Nandray ny diany "loop" tamin'ny fiara tsy miankina ny mpanoratra / mpaka sary tamin'ny 2015.